I-India Business Visa, Indian - India Visa Online
I-e-Visa yaseNdiya yezakhamizi zaseBrithani
I-e-Visa yaseNdiya yezakhamizi zaseMelika
I-e-Visa yaseNdiya yezakhamizi zaseFrance
I-e-Visa yaseNdiya yezakhamizi zaseJalimane
I-e-Visa yaseNdiya yezakhamizi zaseCanada
Amazwe amaningi »
Ukubuka konke kwe-e-Visa Information
I-e-Visa yaseNdiya yezakhamizi zase-US
Izidingo Zedokhumenti ye-e-Visa
Izidingo ze-e-Visa Photo
Izidingo ze-e-Visa Passport
INQUBO YOKUFAKA ISICELO E-VISA
INQUBO YE-E-VISA YOKUFAKA ISICELO THINA ZEZAKHAMUZI
I-E-VISA YABASEBENZISI BESIKHATHI SOKUTHUTHA
UHLU LOKUHLOLA I-E-BUSINESS VISA
I-Visa Yemicimbi Yezokwelashwa
I-5 Year e-TOURIST VISA
I-5 Year e-TOURIST VISA Yezakhamizi zase-UK
I-5 Year e-TOURIST VISA yezakhamizi zase-US
I-e-Business Visa yezakhamizi zase-US
I-e-Business Visa yezakhamizi zase-UK
I-India e-Visa iqala kabusha emazweni ayi-156
Imininingwane yabahambi ngemikhumbi
Imininingwane Yezivakashi Zebhizinisi
Amathiphu wokugwema ukwenqatshwa kwe-e-Visa
Kufanele ubone i-HILL STATIONS E-INDIA
Kumele ubone i-DELHI
Kufanele ubone iKARNATAKA
Kumele ubone iKERALA
UKUDLA KWASEMSWENI OKUDUMILE KWASE-INDIA
Uhambo lweGanges eNgcwele
I-Visa ephuthumayo yaseNdiya
I-India Business Visa (eVisa India yeBhizinisi)
Yonke imininingwane, izidingo, imibandela, ubude besikhathi kanye nenqubo yokufaneleka edingeka noma yisiphi isivakashi eNdiya kushiwo lapha.
Lapho kufika khona ngokuhwebelana kwembulunga yonke, ukuqiniswa kwemakethe yamahhala, kanye nenkululeko yezomnotho wayo, i-India isiphenduke indawo ebamba ukubaluleka okukhulu kakhulu emhlabeni jikelele wezohwebo namabhizinisi. Inikeza abantu emhlabeni wonke ngamathuba ayingqayizivele okuhweba nawamabhizinisi kanye nezinsiza zemvelo ezinomona kanye nabasebenzi abanamakhono. Konke lokhu kwenza i-India ihehe futhi ihehe emehlweni abantu abahlanganyela kwezohwebo nakwezamabhizinisi emhlabeni jikelele. Abantu abavela emhlabeni wonke abanesifiso sokuqhuba ibhizinisi eNdiya manje sebengakwenza kalula ngoba uHulumeni waseNdiya uhlinzeka nge-elektroniki noma i-e-Visa ehloselwe izinhloso zebhizinisi. Ungakwazi faka isicelo seVisa Yebhizinisi yeNdiya online esikhundleni sokuthi uye kwiNxusa Lasekhaya laseNdiya ezweni lakho ngokufanayo.
Izimo Zokufaneleka ze-India Business Visa:
I-Indian Business Visa yenza ukuqhuba ibhizinisi eNdiya kube umsebenzi olula kakhulu kubavakashi bamazwe aphesheya kuleli abalapha ngezebhizinisi kepha badinga ukuhlangabezana nezimo ezithile zokufanelekela ukuthola i-e-Visa yebhizinisi. Ungahlala izinsuku ezingama-180 ngokuqhubekayo ezweni ku-Indian Business Visa. Kodwa-ke, isebenza unyaka owodwa noma izinsuku ezingama-365 futhi iyi- Ukungena okuningana kwe-Visa, okusho ukuthi yize ungahlala izinsuku ezingama-180 ngasikhathi sinye ezweni ungangena ezweni izikhathi eziningi inqobo nje uma i-Visa isebenza. Njengoba igama lalo liphakamisa, uzolifanelekela kuphela uma uhlobo nenhloso yokuvakasha kwakho ezweni kungukuhweba noma ukwenza izindaba zebhizinisi. Futhi noma iyiphi enye iVisa efana neTourist Visa nayo ngeke isebenze uma uvakashele izinhloso zebhizinisi. Ngaphandle kwalezi zidingo zokufanelekela i-Business Visa ye-India, futhi udinga ukuhlangabezana nezimo zokufaneleka ze-e-Visa ngokujwayelekile, futhi uma wenza kanjalo uzokwazi ukufaka isicelo sayo.
Izizathu ongafaka isicelo kuzo i-India Business Visa:
I-Indian Business Visa iyatholakala kubo bonke abavakashi bamazwe aphesheya abavakashela eNdiya ngezinhloso zokuthengisa ngokwemvelo noma ezihlobene nanoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi oluhlose ukwenza inzuzo. Lezi zinhloso zingabandakanya ukuthengiswa noma ukuthengwa kwezimpahla nezinsizakalo eNdiya, ukuya emihlanganweni yebhizinisi njengemihlangano yezobuchwepheshe noma imihlangano yokuthengisa, ukusungula amabhizinisi, amabhizinisi, ukwenza izinkambo, ukuletha izinkulumo, ukuqasha abasebenzi, ukubamba iqhaza emibukisweni yezohwebo neyebhizinisi nemibukiso , nokuza ezweni njengochwepheshe noma uchwepheshe wephrojekthi ethile yezentengiso. Ngakho-ke, kunezizathu eziningi ongafuna kuzo i-Business Visa ye-India inqobo nje uma zonke zihlobene namaphrojekthi wezohwebo noma webhizinisi.
Izidingo ze-India Business Visa:
Izidingo eziningi zesicelo se-Indian Business Visa ziyefana nezamanye ama-visa. Lokhu kufaka phakathi ikhophi elenziwe ngekhompuyutha noma eliskeniwe lekhasi lokuqala (elichaza umlando womuntu) lephasipoti yesivakashi, okumele kube yilo Iphasiphothi ejwayelekile, hhayi iDiplomatic noma olunye uhlobo lwePasipoti, futhi okufanele ihlale isebenza okungenani izinyanga eziyisithupha kusukela osukwini lokungena eNdiya, ngaphandle kwalokho kuzodingeka uvuselele ipasipoti yakho. Ezinye izidingo ikhophi lesithombe samuva sesivakashi sesitayela sepasipoti, ikheli le-imeyili elisebenzayo, nekhadi lasebhange noma ikhadi lesikweletu lokukhokha imali yesicelo. Ezinye izidingo eziqondene ne-Indian Business Visa imininingwane yenhlangano yaseNdiya noma umbukiso wezohwebo noma umbukiso ozovakashelwa yisihambi, kufaka phakathi igama nekheli lereferensi yaseNdiya, iwebhusayithi yenkampani yaseNdiya ezovakashelwa yisihambi, i incwadi yesimemo evela kwinkampani yaseNdiya, nekhadi lebhizinisi noma isiginesha ye-imeyili kanye nekheli lewebhusayithi lesihambeli. Uzocelwa futhi ukuthi ube ne ithikithi lokubuya noma lokuya phambili ngaphandle kwezwe.
Kufanele ufake isicelo seVisa Yebhizinisi yeNdiya okungenani Izinsuku ezingu-4-7 kusengaphambili ngendiza yakho noma usuku lokungena kwakho ezweni. Ngenkathi i-e-Visa ingadingi ukuthi uvakashele Inxusa LaseNdiya, kufanele uqiniseke ukuthi ipasipoti yakho inamakhasi amabili angenalutho ukuze Isikhulu Sokufuduka sigxize esikhumulweni sezindiza. Njengamanye ama-e-visa, ophethe i-Indian Business Visa kufanele angene ezweni evela ku- kuvunyelwe ukuthunyelwa kwamanye amazwe kokuhlola okubandakanya izikhumulo zezindiza ezingama-28 namachweba ama-5 futhi ophetheyo kufanele aphume nakokugunyaziwe kwe-Immigration Check Posts.
Yilokho kuphela okudingeka ukwazi ukuze uthole ukuthi ngabe uyifanele yini i-Indian Business Visa nokuthi yini konke okuzodingeka kuwe lapho ufaka isicelo esifanayo. Ukwazi konke lokhu, ungafaka isicelo kalula seBusisa Visa yaseNdiya elingelakhe ifomu lesicelo ilula futhi iqondile futhi uma uhlangabezana nazo zonke izimo zokufaneleka futhi unakho konke okudingekayo ukukufaka lapho-ke ngeke uthole ubunzima bokufaka isicelo. Uma, noma kunjalo, udinga noma yikuphi ukucaciswa okufanele ukwenze thintana nosizo lwethu ukwesekwa nokuholwa.
Uma uza iVisa Yezokuvakasha bese ubheka izidingo ze- India Visa Visa.
e-VISA INDIA ULWAZI
Imibhalo ye-e-VISA Iyadingeka
INQUBO YOKUFAKA ISICELO se-e-VISA
UMBONI WEZOKWELAPHA e-VISA
I-VISA YOKUVAKASHA YONYAKA EYI-5
AMAPHUZU OKUNGENELA NEMITHETHO
PHUMA AMAPHUZU NEMITHETHO
IZIMBONI ZABAHAMBI BEBHIZINISI
i-e-VISA YEZAKHATHI ZETHU
AMACEBISO OKUGWEMA UKWEQASHWA KWAMA-e-VISA
CRUISE UMKHUMBI WABAHAMBI BEMIKhumbi
IZINYANGA ZENU E-INDIA
KUMELE UBONE IZITESHI ZAMAHILL
KUMELE UBONE UDELHI
KUMELE UBONE UKARNATAKA
KUMELE UBONE UKERALA
UHAMBO LWEZINGUQUKO EZINGCWELE
I-TOP 10 YOKUDLA KWASE-INDIAN STREET
SEBENZISA I-VISA YASE-INDIYA KU-INTANETHI
Ukuzikhulula: IVisa yaseNdiya ekhishwe yile webhusayithi yezentengiso isetshenziswa ngqo kwiHhovisi Likahulumeni Lokufuduka Kwabahulumeni baseHulumeni. UHulumeni waseNdiya akaqokile i-www.india-visa-online.org ngqo, ngokungaqondile noma ngokukhethekile. Imali ekhokhelwayo ikhokhiselwa izinsizakalo zethu kanye ne-Government Visa Levy kulabo abafaka izicelo kule webhusayithi.